आउनै लाग्यो ब्लगर भेला
Welcome to Dautari, The Blog Chautari.Enjoy in rea...
अपडेट: केही समयबाट ब्लगर भेला हुने समय सम्म सम्मेलनको परिक्षण स्वरुप राखिने छ। ब्लगर भेलामा सामेल हुन कमेन्ट बक्समा सहभागिताको जनाउनु होला। ब्लगर भेला सफल गराउन केही राम्रा उपाए भए जानकारी गराउनुहोला। पेज लोडीगं सजिलो गर्न दौंतरीका केही सामाग्री अस्थाइ समयको लागी हटाइने छ। केही कारणबस www.dautari.org ले काम नगरे www.dautari.blogspot.com बाट भेलामा सामेल हुनुहोला।
अपडेट: ब्लगर भेलामा संसारका सबै कुनाबाट ब्लगर जम्मा हुनाले समयको मेसो मिलाउन निकै गार्हो भयो भने कसरी गर्ने अली असरल्ल परियो।
तर जसरी पनि यो भेला सम्पन्न हुनेछ भने ब्लगर मित्रहरुको सहभागिता निकै प्रंछसनिय छ। केही मित्रहरुले भेलामा कसरी सामेल हुने भन्नु भयो? यही ब्लगमा आफ्नो सहभागिता हुने जनाउनुहोस अनि नेपाली समयमा साउन १७ बिहान ११ देखी १ बजे दौंतरीमा आउनुहोस र खुला रुपमा ब्लग संबादमा सहभागी हुनुहोस।
ब्लगर भेलाको रुप रेखा यस प्रकार छ।
- उद्घघाटन तथा झण्डोतोलन
- रा्ष्ट्रिय गान
- सभापती चयन
- सहभागीको नाम तालीका
- स्वागत मन्तव्य
- परिचय तथा प्रस्ताबित बिषय
- प्रस्ताबमा छलफल
- छलफलको निचोड
- कार्यक्रम समापन
छलफलको टेक्ट प्रकासित गरिनेछ जसबाट सहभागी हुन नसक्ने तथा अन्य पाठकले जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ।
नेपाली ब्लगरसंग एक आपसमा इमेल आदान प्रदान गर्न nepali-bloggers@googlegroups.com मा सहभागी हुनुहोला। ब्लगर ग्रुपको सदस्यको लागी dautari@gmail.com मा खबर गर्नुहोला।
केही पहिला दौंतरीमा ब्लगर भेला गर्ने कुरो उठेको थियो। त्यसमा उत्सुकता र सहभागिता पनि निकै आएको थियो। भने पछि सबै तयार हुनुहुन्छ हैन त ब्लगरभेलाको लागी? यो पहिलो भेला रुपरेखा त तयार भएको छैन। अंग्रेजी महिनाको हरेक अन्तिम अमेरीकी शुक्रबार राती 12:15 बाट 2:15 ( नेपालको शनिबार बिहान ११ बाट १ - समय रिफ्रेसन्स चाही नेपालको समय राखौं है) भनेर मैले प्रस्ताब राखेको थिए। यो समय पनि कस्तो कही सुत्ने बेलामा कहि उठ्ने बेला हुन्छ। कही भात खाने बेलामा कही खाजा खाने बेला हुन्छ। त्यसैल समग्रमा धेरै साथीहरु फेसबुकमा जम्मा हुने समय अमेरीकी सेन्ट्रल समय शुक्रबार १० देखी १२ पाएं। त्यसैले यो समय रोजेको हुं। अहिलेलाइ यहि समयको रेखामा हिड्औं। पछि फेरबदल गर्नु परे गरुंला।
संसारै भरी छरिएका नेपाली ब्लगर एकै पटक जम्माहुंदा कस्तो हुन्छ निकै रमाइलो अनुभव भइराखेको छ। तर सबै एकै पटक कसरी जम्मा हुनुहुन्छ त्यो भने हामी सबै मिलेर सबैलाइ जानकारी दिनुपर्छ। अर्थात हामी सबै पहिलो नेपाली ब्लगर भेलाका प्रतिनिधी हौं। तपाइहरु भेला हुनको लागी जानकारी यही कमेन्टबक्समा दिनुहोला ताकी हामी सबैलाइ थाहाहोस को को ब्लगर मित्रहरु उपस्थित हुनसक्नुहुन्छ भन्ने। साथै सुझाबहरु पनि यहि कमेन्टबक्समा दिनुहोला। त्यसै अनुरुप यो ब्लग अपडेट गर्दै ब्गलर भेलाको रुपरेखा कोरौंला। ब्लगर गफ चाही दौतरी साउट बक्समा हुनेछ। ब्लगर भेला हुने समयमा दौंतरी संबाद बाकस पेजै भरी राखिने छ। समय समयमा ब्लगरभेलाको तयारी स्वरुप परिक्षण गर्दैलाने छौं। ब्लगर भेलाको समयमा यदै www.dautari.org केही कारणबस ह्यांग भए www.dautari.blogspot.com बाट ब्लगरभेला सुचारु गरिनेछ। अब तपाइ पनि ब्लगर भेलाको लागी आफ्नो क्यालेन्डरमा रेखा कोरीहाल्नुहोला।
भेलामा आउने मित्रहरुको नामावली ( सहभागिता हुने जानकारी दिए पछि नाम थपिंदै जानेछ)
१) नेपालियन - www.dautari.org
२) हावा द विन्ड - http://hamronepalma.blogspot.com/
३) दूर्जेय चेतना - http://doorjeya.blogspot.com/
४) Sujan Sharma - http://sujanacharya.blogspot.com/
५) Shiva Prakash - www.nepalimanharu.com
६) Dilip Acharya - http://dacharya.blogspot.com/
७) NKM - http://ajabgajab.blogspot.com/
८) खुल्लामन्च - www.khullamanch.blogspot.com
९) BasantG - http://giri25.blogspot.com/
१०) ठरकि दादा- www.dautari.org
११) Milan - http://www.milanl.com/
१२) सपनासंसार - www.sapanasansar.com
१३) जोतारे धाइबा - www.dautari.org
१४) Lovlyanup - http://lovlyanup.blogspot.com/
१५) हाम्रो ब्लग - www.hamroblog.com
१६) हिमाल पारी - www.dautari.org
१७) एकलब्य - www.dautari.org
१८) प्रलाद - http://hamronijgadh.blogspot.com/
१९) world flows - http://wordflows.blogspot.com/
२१)चन्द्र मगर - http://madihungri.blogspot.com/
२२) वाका - www.dautari.org
२३) बसन्त गौतम - http://www.basantagautam.com/
१३) सुमन शर्मा
ल राम्रो प्रयास...तर सफल होला के ?
सबैलाई यहाँ पुरस्कार नै चाहिएको छ दिन सकिएला के ?
हावा जी पुरस्कार त कसरी दिने र खै? तर ब्लगर जमघटबाट गतिलै कुराहरु सिके त्यो भन्दा ठुलो पुरस्कार के होला र?
तपाइले भेलालाइ समय छुट्टाउनु भयो त?
राम्रो थालनी। सबैको भेला एकै समयमा हुने कुरामा चाहि कसरी व्यवस्थित गर्ने होला कुन्नी? ब्लगर भेलाको रुपरेखाबारे चाँडै जानकारी पाउँने आशा गर्छु
म भने कुनै शनिबार समयमा उपस्थित हुन नसक्ने भए मेरो आफ्नै कार्य ब्यस्थताको कारण दु:ख लागेको छ तर केही छैन साथीहरुको उपस्थितिमा खुशी बनाउल नि ।कथम कदाचित समयामा हेरफेर भएछ भने सक्दो प्रयास गरौला नि।
धन्यवाद नेपालीयन जी,
हेहेहे...हेरम के हुन्छ, जतिसुकै खोके पनि गर्ने बेलामा डटी होइन लडी हटने नेपाली को बानी हुन्छ ममा पनि छ
तेस माथि पुरस्कार नै रैन रछ..नेट मा चियापान पनि आँफैले गर्नु पर्ने हुन्छ..प्रबिण जी ले जस्तै सक्दो प्रयास गर्नुपर्ला
तेस्को अर्थ बुझ्नुभो होला हैन त ब्रो ?
सरी है..माफ पाउ...इस्क्युज मि
म भने कुनै शनिबार समयमा उपस्थित हुन नसक्ने भए मेरो आफ्नै कार्य ब्यस्थताको कारण दु:ख लागेको छ तर केही छैन साथीहरुको उपस्थितिमा खुशी बनाउल नि ।
केदार श्रेष्ठ 'गगन' said...
ल शुभकामना छ । म चाहि भेलाको समयमा अलि ब्यस्थ हुने भएकोले उपस्थिति हुन सक्दिन कि तर सक्दो प्रयास गर्नेछु ।
भने पछि जम्मा हुने म हावा जी मात्र? त्यो पनि चिया नै चाहिने, हुन्छ नि अनलाइन चिया बाडुंला।
कैलाश जी भेला नेपाली समय अनुसार साउन १७ शनिबार बिहान ११ देखी १ बजे सम्म। उक्त दिन अगस्ट १ पर्न जान्छ।
प्रबिण जि, प्रकाश जी,केदार जी, समय मिलाएर आउने प्रयास गर्नुहोला। अझै ६ दिन जती छन, समयमा मिलाउन पक्कै सजिलो होला। तपाइहरु आउन नमिले पनि अरु ब्लगर मित्रहरुलाइ खबर भने पक्कै गर्नुहोला।
समयलाई ब्यवस्थित गर्ने जमर्को गर्दा गर्दै पनि अहिले सम्म मिलाउन सकेको छैन । शनिबारको जमघटमा सहभागी हुने कुरा मेरो लागि "आकाशको फल आँखा तरि मर" जस्तै भयो । त्यसैले यो पटकको भेलामा मैले पनि उपस्थिति हुने मौका गुमाउदैछु ।
भेलामा उपस्थित ब्लगरहरुबिच साटिएका बिचार र गन्थनका पोकाहरुलाई यै दौतरीमार्फत पढन पाउने आशा राखेको छु । भेलामा उपस्थित हुन तयार सम्पूर्ण मित्रहरुलाई अग्रीम शुभकामना ।
सुर्यजी ले राम्रो कुरा उठाउनु भयो। भेलामा भएका गन्थन टेक्टमा दौतरीमा राख्दा छुटेका मित्रहरुले पछि पढ्न पाउनुहुनेछ।
सुर्य जी सुझाबको लागी धन्यबाद। पक्का पनि तपाइको सुझाबले आउन नमिल्ने मित्रहरुलाइ आफ्नो समय मिलाएर जानकारी पाउन सहयोग गर्नेछ।
म पनि आउने छु यो मेलामा।
ल म पनि आउने भएँ है।
अमेरीकी सेन्ट्रल समय शुक्रबार १० देखी १२बजे भनेपछि इस्टर्न समय सायद १ घण्टा कम हुन्छ होला । म पनि प्रयत्न गर्ने छु है मित्रहरू !
यसका लागि DAUTARI लाइ साधुवाद !
हुन त मेरो पनि जागीर खाने समयमा पर्छ,तर पनि जागीर खाने समयमा पनि "भात खाने" बेलामा पर्ने भएकोले म पनि आईपुग्छु । अनलाईन पर्‍यो, नत्र त यस्तो भेलामा लन्चको पनि व्यबस्था हुन्थ्यो होला :)
शीब जि सेन्टरल १२ देखी २ परेछ। इस्ट्रन १ परेछ। यस पालीको टाइम रोजाइ अली राम्रो भएन कि जस्तो लाग्दैछ।
दिलिप जि,सुजन जि,शिब जि,दुर्जय सबैलाइ धन्यबाद।
All the Best hai, I will also try to come.
नमस्कार ! आफ्नै नाक ठुलो परेको जस्तो हुन्छ तर पनि भन्नै मन लाग्यो । नेपालीयनजी सँग 'ब्लगर एक्जुटको चांजो-पांजो" गर्ने सल्लाहले सार्थकता पाउन लागेकोमा खुशी लागेको छ । गत साल अक्टोबरमा ब्लग सुरु गर्दा उठाएको कुरा आज दौतरिले पुरा गर्न लागेकोमा एक मुरी पांच पाथी धन्यवाद छ ।
म त कुनै पनि हालतमा उपस्थित हुनेछु । के कसम खाम् ?
सम्पूर्ण ब्लग र ब्लगप्रती आस्था राख्नुहुने सम्पुर्ण भक्तजनहरुमा दौतरी मन्दिरमा दर्शनार्थ पाल्नुनै होला भन्ने बिन्ति-आशा छ ।
ओ,हो,सारै राम्रो कुराको थालनि गर्नु भएछ दौतरीको मित्रहरुले तर ब्यस्तताको कारण म चहि उपस्थित हुन सक्दिन होला।तर पनि अरु मित्रहरुको बिचार मन्थनहरु हेर्ने पाउने आशा गर्छु,जस्को लागि अग्रीम शुभकामना,,,
आउने नआउने मिस्रित खबरको लागी धन्यबाद। पक्का आउने मित्रहरुको लिस्ट तयार पार्नेछु ताकी भेलामा सबैले कुरा गर्ने मौका पाउन तथा भेलामा ब्यबस्थीत तबरले कुरा गर्न सकियोस। अरु के के गर्ने सकिन्छ सबैले सोच्दै गर्नुहोला।
हुन त हाम्रो तर्फबाट एकजना जो आएपनि होला, तर साथिहरुको उत्साह देख्दा र कोही, अफीस कोही खाना समेत हापेर आउने जानकारी पाउँदा रमाईलो लाग्यो ।
ल, है ईमरजेन्सी केही परेनछ भने म पनि झोल-चौटा सबै छाडेर आउनेछु ।
अनि अर्को कुरा, यो भेलाको गफगाफलाई कपी-पेष्ट गर्दै राख्‍न पर्छ की ? । पछि त्यसको आधारमा भाग लिन नभ्याउनु भएका मित्रहरुलाई छलफलको हाईलाईट'टेलीकास्ट' गर्न मिल्छ कि भनेर है ।
यो सि-बक्समा जम्मा रिसेन्ट १०० (मेसेज) लाईन मात्रै व्याकअपमा रहन्छन, त्यो भन्दा नाघ्ने बित्तीकै पुराना मेसेजहरु डिलिट हुन्छन, त्यसैले सम्झाएको है ।
म पनि सामेल भएको खण्डमा म नै यो काम गरौंला, 'ईन केश' भ्याईन भने अरु साथिहरुले याद गर्नु होला ।
अनि अन्ततिर त यस्तो भेलामा यस्सो 'रसद पानी' को पनि व्यबस्था हुन्थ्यो, यो त अनलाईन भेला पर्‍यो, अब आ-आफै व्यबस्था गरेर राख्‍नु पर्ला कम्प्युटर अगाडि :)
ठरकी जि त सप्ताहअन्तमा बेपत्ता? हाम्रो तर्फबाट एक जना? ल दौंतरीका त सबै ब्लगर आउनुपर्छ नि के भन्नुभएको? यसै अबसरमा दौंतरीका ब्लगरसंग म पनि चिनापर्ची गर्ने सुरमा छु ;)
ब्याकअप राखेर छूटेका साथिहरुलाइ पछि पढ्न मौका दिने कुरा उठेको थियो। ल ठरकी सर कपि पिस्ट गर्नलाइ कलम कापी लिएर तयार रहनु होला। रसद पानी को चिन्ता नगर्नुस, सबैलाइ अनलाइन चियाको ब्यबस्था छ।
आफु चाहीं सेन्ट्रल जोनमा परिएकोले केही फाईदो नै भो | हुन त शनिबार बिहान पाँच बजे देखि काम छ ... तै पनि परिस्थिति र इन्टरनेटले साथ दिए म पक्का आउंछु ..
अनि शिव प्रकाश जी ,
तपाईंको ईस्टर्न टाईम जुलाई ३१ शुक्रबार राति १ : १५ देखि ३:१५ चाहिं होला कि !
यो ब्लगर सम्मेलनमा, एउटै प्रस्तुती धेरै आगनीमा विच्छ्याउने प्रविर्ती को बन्द गराउने खालको एजेण्डा प्रस्तुत गरौ ! है त साथी हरु !
म चाहीं दौतरीको लागि विशेष सामाग्री जुटाउन क्यामेरा बोकेर "सीमाना" तिर लाग्दैछु, भेलालाई सफल बनाउने काम बांकी दौतरीहरुको !
जिरो आउर जी सिमानामा बाट ब्लगर भेला लाइभ त होइन है? ठट्टा मात्रै। बेलाको टेक्ट पक्कै पढ्न पाउनुहुनेछ।
अन्य ब्लगर मित्रहरुलाइ पनि भेलामा सहभागी हुन जानकारी दिनुहोला।
सपना संसार जी तपाइ भेलामा आउने कुरा भन्नु भएको रहेनछ, हिजो फोन संबादको भरमा तपाइ आउने लिस्टोमा नाम चढाए।
यस्तो शुभ कार्यका लागि दौँतरीलाई धेरै शुभ कामना !
मेरो भने यसपाली क्षमायाचना गर्ने विकल्प र आत्मसमर्पणकै बाटो मात्र देखियो है । नेटको पहुँचमा पनि हुनेछु र कामको त्यस्तो चापाचाप पनि पर्दैन त्यस समयमा । तर अहिले नै उपस्थित हुन वाचा गर्न गर्न भने मुश्किलै हुनेछ ।
विद्युतीय सञ्चारमाध्यमको समाचार शाखाको काममा कतिखेर के पर्छ, ठेगान हुँदैन । अत: मैले भने हस्ताक्षर गरिनँ यो पालीलाई । तर मेरो पूरापूर समर्थन र साथ छ यस अभियानमा । यसो हल्लाखल्ला भने गरूँला यस बीचमा ।
भेलाको गफगाफ सार्वजनिक रूपमा पछि टाँसिने कुराले भने आफू उपस्थित हुन नसक्ने कुरालाई राम्रैसँग क्षतिपूर्ति गर्ने देखेँ । यो चाँजोपाँजोको लागि आभार ! दौँतरीका मियो मुटुहरूलाई ।
भेलामा नेटको पहुँचमा पनि हुने र कामको त्यस्तो चापाचाप पनि नहुने हुंदा धाइबा जि पनि आउने पक्का भयो हैने त?
अब अपरझट त जस्लाइ जे पनि पर्न सक्छ नि हैन र?
लु म पनि आउने पक्का भयो है ।
ल हिमाल पारी जि तपाइको नाम पनि लिस्टोमा तयार भयो। अब यही लम्बरको रातो रिबनको ब्याच तयार पार्नुहोला। अनलाइन चियाको भने ब्यबस्था छ।
चिया चाँही www.chiyapasal.com ले sponsor गरेको हो कि के हो ?
ठरकी सर चाट बक्सलाइ अटो रिफ्रेस गर्ने ब्यबस्था मिलाउनु पर्यो। नत्र हरु नै टुल्स प्रयोग गर्नु पर्ला जस्तो छ। अनि भेलाको दिनमा दौंतरीको टपको ब्यानर हटाएर साडमा राखेर काम चलाउनु पर्यो ताकी सक्दो धेरै पढ्न पाइयोस।
म पनि केही दिन देखी यो अटो रिफ्रेसको चक्करमा थिएँ, तर हालको बक्समा भने अटो रिफ्रेस प्रिमियम एकाउण्टमा मात्रै रै छ, तर अरु अल्टरनेट धेरै छन।
ब्यानर हटाउनु पर्ला र ? । ब्यानर हटाउनु जरुरी भए हटाउँला केही छैन, त्यो एकैछिनको काम हो । म साईडमा राख्‍न सानो ब्यानर बनाउँदै गर्छु ।
ठरकी सर मैले डमी ब्लग हेरें। राम्रो लाग्यो। केही परिबर्तन गर्नुपर्यो अब।
दौंतरीको टप ब्यानर अस्थाइरुपमा हटाएर साइडमा राख्ने। फूलस्क्रिन अपस्न हटाए ठिक होला किनकि युजरलाइ यता उता आउ जाउ गर्नुनपरे पछि प्रयोग गर्न झन सजिलो हुन्छ। माथिको शिर्षक पनि हटाउदा अझ स्पेस बढी हुन्छ। दौंतरी ब्लगर भेलाको सट्टा प्रथम अन्तराष्ट्रिय भेला रांखौं। टेम्पलेटको ब्याकअप मैले सुरक्षित राखेक छू। लोडिगं हुन टाइम लाग्ने शुक्रबार सबै हटाउनु पर्छ।
हवस मेरो नाम पनि थपिदिनुस्
म पनि हुन्छु मेरो नाम पनि थपिदिनुस्
ma pani aauchhu blogger bhelaa ma but electricity bhayo bhane. loadshedding hate dekhi jahile mana lagyo tehile batti nibhuchha
Dhnyabad sabai blogger sathi harulai.
worldflows ji k garne batti le , internet le dhoka diye k lagcha ra. haina ta?
La sathi haru name chuteko chha bhane jankari dinuhola. auna namile ya 5-10 minute matra bhaye pani time mile auna nbhulnuhola.
खुशी र उत्साहित भएको छु । आशा छ, भोलिको दुई घण्टा फलदायी नै होला । अझै म जस्तो ब्लगको संसारअंा पाइला टेक्न प्रयत्न गरिरहेको सिकारुलाई ..